याे हाे नि धन कमाउने तरिका, यसरी भए राेडदेखि कराेडपतिसम्म…!
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ३०, २०७४ समय: ९:०५:०५
दमौलीका हरिलाल विक ०४८ मा पोखराको सेतीपुलमा असल्ल औँठी फि“जाएर बस्न थाले । उनले सडकमा बिस्कुनजस्तै सुकाएका हुन्थे– कान कोट्याउने कनकर्नु, दारी फाल्ने मेसिन र मालाहरू । तिनै सामानमा आफ्नो भविष्य देखेका थिए, हरिलालले । त्यसैले त उनी जुरुक्क उठेर झोला बोकी डेराबाट निस्कन्थे अनि रात नपर्दासम्म सडकमै पसिना चुहाउँथे । बुटवलसम्म पुगेर दुई रुपैयाँमा औँठी बोकेर आउँथे र सडकमा ल्याएर आठ रुपैयाँसम्म पार्थे । सडकमा बस्नेलाई कसले सत्कार गर्ने ? त्यस्ता केही अपमान उनको गुजारा र सपनाअगाडि फिका थिए । उनी श्रमलाई घृणा गर्ने सहरमा श्रमसँग पैसा साटिरहेका थिए ।
त्यसपछि हरिलाल ग्यास–स्टोभ, ग्यास–स्टोभ… भन्दै साइकलमा बसेर पोखराको गल्ली चहार्न थाले । कतिले उनलाई भैया, धोती भन्दै गिज्याए पनि, तर कत्ति पनि बिचलित भएनन् । भन्छन्, ‘सुरुको दुई–तीन महिना त लाज भयो । काम गर्दै गएपछि सामान्य नै लाग्न थाल्यो ।’ नेपाली भएर पनि यसरी काम गरेको देखेर कतिले सम्मान पनि व्यक्त गर्थे ।
करिब नौ महिनापछि उनको व्यवसायमा ठूलो अवरोध खडा भयो । सरकारले रत्नपार्कमा डोजर लगायो, जसका कारण उनी त्यो व्यवसायबाट विस्थापित हुन पुगे । त्यसपछि पनि उनले ज्यामी कामलाई निरन्तरता दिए । सामान्य खालको ठेक्कासमेत लिएर काम गर्न थाले । उनको भाइ काठमाडौं आइसकेपछि भने रत्नपार्कले दिएको ६० हजार रुपैयाँले किराना पसल सुरु गरे । विडम्बना ! त्यो व्यवसाय फस्टाएन । अनि हात हाले, मासु व्यापारमा ।
पढ्न भनेर काठमाडाैं आएका चित्रकुमारलाई अभावले पढ्न दिएन । बरु, छाक टार्नका लागि पत्रिका बेच्दै हिँडे । केही समयपछि उनी सरस्वती क्याम्पसमा भर्ना भए । बिहान क्याम्पस जाने उनी दिनभर पत्रिका हातमा लिएर कराउँथे, ‘आयो सन्ध्याकालीन ताजा खबर, ताजा खबर… ।’ पत्रिका हल्लाउँदै उनी पुतलीसडक, नक्साल, सरस्वती क्याम्पस, लैनचौर, लाजिम्पाटलगायतका सडकमा भौँतारिन्थे । एक वर्ष उनको दैनिकी त्यसरी नै बित्यो । भन्छन्, ‘एक रुपैयाँमा पत्रिका लिएर दुई रुपैयाँमा बेच्थ्यौँ । दिनमा त्यस्तै ५०–६० वटा पत्रिका बिक्री हुन्थ्यो ।’
त्यतिवेलाको रमाइलो किस्सा सुनाउँछन् चित्रकुमार, ‘मीनभवनमा माथिबाट बोलाएर बदाम पु¥याउन गएको थिएँ । मलाई बदाम लिएर बोलाउने त सँगै क्याम्पस पढेको साथीकी श्रीमती पो रहिछिन् ! म त्यो कोठामा पस्नै सकिनँ । लुकेर भागँे ।’ उनको जीवनसँग गाँसिएका यस्ता थुप्रै अनुभूति छन् ।
ओखलढुंगा गाम्नाङटारका तीर्थराज भट्टराईको घरअगाडि प्रधानाध्यापकको घर थियो । उनको घरमा जिल्लाबाट माथिल्लो ओहोदाका मान्छेहरू आइरहन्थे । एकपटक घोडाको लगाम समाउँदै एकजना मान्छे आए र तिनै प्रधानाध्यापकको घरअगाडि रोकिए । घोडावाल थिए– जिल्ला शिक्षा अधिकारी । अर्को दिन त्यो घोडा देखेपछि उनकी आमाले तीर्थराजतर्फ फर्कंदै भनिन्, ‘मेरो छोरा यस्तै घोडा चढ्ने होला कि नहोला ?’ जतिवेला तीर्थराज दुई कक्षामा अध्ययन गर्थे ।